Nhau - Unoziva here ruzivo urwu rwese nezve kuramba waya?
Kune yekudzivirira waya, simba rekurwisa kwedu rinogona kusarudzika zvinoenderana nekupokana kwetambo yekudzivirira. Iyo yakakura simba rayo, zvinokwanisika kuti vanhu vazhinji havazive kusarudza waya yekumisikidza, uye hapana ruzivo rwakawanda nezve iyo yekumisikidza waya. , Xiaobian ichatsanangura kune wese munhu.
Resistance waya ndiyo yakajairika mhando yekupisa chinhu. Basa rayo kugadzira kupisa mushure mekusimbisa uye kushandura simba remagetsi kuita kupisa. Resistance waya ine akasiyana mafomu. Mazhinji anowanzo shandiswa emagetsi ekupisa zvishandiso anoshandisa kuramba waya seye element element. Naizvozvo, waya yekurwisa inoshandiswa mune zvekurapa, zvemakemikari, zvemagetsi, zvemagetsi, metallurgical michina, zvedongo girazi kugadzira uye mamwe maindasitiri.
1. Iyo inoshanda musimboti yekudzivirira waya
Iyo inoshanda musimboti yekumisikidza waya yakafanana neiyo yeimwe simbi yekupisa zvinhu, uye ndiyo yemagetsi kudziyisa chiitiko mushure mesimbi yagadziriswa. Kupisa kwemagetsi zvinoreva kuti mushure mekufamba kwazvino kuburikidza nekondakita, iyo yazvino inogadzira imwe nhanho yekupisa uye yoendeswa nemutungamiriri. Iyo yekudzivirira waya pachayo ndeye simbi kondakita, iyo inoburitsa kupisa uye inopa kupisa simba mushure mekusimbiswa.
2. Kupatsanura kwesimbi waya
Mhando dzekumisikidza waya dzakakamurwa zvinoenderana nechemical element yezvinyorwa uye nesangano chimiro chesimbi yekudzivirira. Iko kune iron-chromium-aluminium alloy kuramba waya uye nickel-chromium alloy kuramba waya. Sezvo zvemagetsi kudziyisa zvinhu, idzi mbiri mhando dzekudzivirira waya dzine akasiyana mashandiro maitiro.
3. hunhu hwekudzivirira waya
Iyo yekudzivirira waya inoonekwa neakanyanya tembiricha kuramba, kupisa nekukurumidza, hupenyu hwakareba hwebasa, kugadzikana kuramba, kutsauka kwesimba diki, yunifomu tambo kukanda mushure mekutambanudza, uye yakajeka uye yakachena nzvimbo. Inoshandiswa zvakanyanya mune zvidiki zvemagetsi emagetsi, muffle mavira, kudziyisa uye mweya wekugadzirisa michina, ovhoni dzakasiyana siyana, Magetsi kudziyisa machubhu nemidziyo yemumba, nezvimwewo Zvisiri-zvakajairika maindasitiri uye ehurumende turu mabara anogona kugadzirwa uye kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
4. zvakanakira nekuipira kwesimbi-chromium-aluminium alloy resistance waya
Iyo iron-chromium-aluminium alloy yekumisikidza waya ine mukana weiyo yakanyanya kushanda tembiricha. Iyo bvunzo inoratidza kuti iyo yakanyanya kushanda tembiricha yesimbi-chromium-aluminium alloy kuramba waya inogona kusvika 1400 ° C. Iyo iron-chromium-aluminium alloy inodziya waya ine hupenyu hwakareba hwebasa, kukwirisa kukwirisa, kukwirisa kwepamusoro kusanganisa, uye yakanaka oxidation kuramba.
Iko kusakosha kwesimbi-chromium-aluminium alloy yekumisikidza waya isimba rayo rakadzika munzvimbo dzakakwirira dzekupisa. Sezvo tembiricha inowedzera, iyo plasticity yesimbi-chromium-aluminium alloy kuramba waya ichawedzera, zvinoreva kuti iyo iron-chromium-aluminium alloy yekumisikidza waya inokanganisa deformation pakakwirira tembiricha. Uye hazvisi nyore kugadzirisa mushure mekushanduka.
5.zvakanakira nekuipira nickel-chromium alloy resistance waya
Zvakanakira nickel-chromium chiwanikwa kuramba waya waya kwakakwirira simba mune yakanyanya tembiricha nharaunda, yakareba-refu tembiricha oparesheni haisi nyore kuumbika, uye hazvisi nyore kuchinja chimiro, uye zvakajairika tembiricha mapurasitiki epurasitiki nickel-chromium chiwanikwa kuramba waya yakanaka, uye iyo yekugadzirisa mushure mekushomeka iri nyore. Uye zvakare, nickel-chromium alloy resistance waya ine emissivity yakakwira, isiri-magineti, yakanaka ngura kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Iko kusakosha kweiyo nickel-chromium alloy kuramba waya ndeyekuti iyo tembiricha yekushanda haigone kusvika padanho reiyo yapfuura kuramba waya. Iyo yekugadzirwa kweini nickel-chromium alloy resistance waya inoda kushandiswa kweiyo nickel. Mutengo wesimbi iyi wakakwirira kupfuura iwo wedare, chromium nealuminium. Naizvozvo, iyo yekugadzira mutengo weiyo nickel-chromium alloy kuramba waya ndeyehurefu, iyo isinganetsi kudhura mutengo.
Nichrome, Nickle Chrome Alloy Wire, Kuayina Machines, Sayenzi Kunyorera, Ribbon Alloy Bayonets, Ion Nitriding,